အဖြစ်အပျက်စီစဉ်ခြင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းပုံစံ Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, စက်တင်ဘာလ 28, 2011 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 9, 2022 Douglas Karr
ငါတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ငါမယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ရပ်အချို့ကိုပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါ Webtrend ၏ Engage, ExactTarget ရဲ့ဆက်သွယ်မှု နှင့် BlogWorld ကုန်စည်ပြပွဲ - ဖြစ်ရပ်တစ်ခုသို့ရွေ့လျားနေသည့်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဤအဖွဲ့အစည်းများက၎င်းတို့အားမည်မျှချောမွေ့စွာစုစည်းထားကြောင်းကျွန်ုပ်အမြဲတမ်းစိတ်ပျက်သွားသည်။
ငါအစီအစဉ်တစ်ခုစီစဉ်မဟုတ်ပါဘူး။ ငါထောင်ပေါင်းများစွာ၏ visitors ည့်သည်ဘယ်တော့မှတစ်ကြိမ်မှာ client ကိုထက်ပိုမိုအနိုင်နိုင်, အနိုင်နိုင်။ (ဒါကြောင့် Jenn ကငါတို့နဲ့အတူအလုပ်လုပ်တယ်!) ။ အချို့သောရှေးရှေးများသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖြစ်အပျက်စီစဉ်သူများ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမတတ်နိုင်ကြပါ။ ပထမ ဦး ဆုံးအဖြစ်အပျက်သည်အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပြီး၊ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုသည်သင်၏ခါးစည်းအောက်တွင်ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်နောက်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုမြှင့်တင်ရန်သင့်တွင်ပရိသတ်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ သင်၏အဖြစ်အပျက်ကကြီးနေသရွေ့အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသင် ဆက်လက်၍ ကြီးထွားလာနိုင်ပြီး၊ ပွဲ၏တန်ဖိုး၊ ၎င်း၏စပွန်ဆာနှင့်ပရိသတ်ကိုအမှန်တကယ်တည်ဆောက်နိုင်သည်။
ဒီကနေ infographic HubSpot နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်ပါ ပွဲစီစဉ်ခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ခြင်းတို့၏သော့ချက်ကျသောအရာများအားလုံးမှတစ်ဆင့်သင်၏အဖြစ်အပျက်ကိုစီစဉ်ခြင်း၊ သင်၏အဖြစ်အပျက်ကိုမြှင့်တင်ခြင်း၊ လူမှုမီဒီယာများကိုဆွဲဆောင်ခြင်း၊ ငါ infographic လူမှုရေးမီဒီယာကိုအပြည့်အဝအသုံးချဖို့ပြောသောကြောင့်ငါချစ်! ရှေးရှေးသည်သင်၏အဖြစ်အပျက်၏ hashtag နှင့်တက်ကြွစွာတွစ်တာရေးသားခြင်းအားဖြင့်၊ သင်သည်သူတို့၏ကွန်ယက်များအတွင်းဖြစ်ရပ်၏အရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်နေသည်။ လာမယ့်နှစ်အတွက်ဒီဟာကအရေးကြီးတယ်။ မင်းသူတို့ကိုသူတို့ကို voyeurs ကနေပါ ၀ င်လာသူဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲလိုက်ရင်!
1:2011 pm မှာအောက်တိုဘာ 10, 53
အမှန်ပါ… တစ်ခုခုကို သင်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်လို့ ခိုင်မာတဲ့ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗျူဟာနဲ့ အရောင်းကျွမ်းကျင်မှုတွေ မလိုအပ်ဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။
ဇွန်လ 8 ရက် 2012 ခုနှစ် နံနက် 11 နာရီ 26 မိနစ်
Doug သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော ရှာဖွေမှုဖြစ်ပြီး၊ ဤကဲ့သို့သော အချက်အလက်ဂရပ်ဖစ်ကောင်းကို ရှာဖွေနေပါသည်။ ဒါကို သူငယ်ချင်းတချို့နဲ့ မျှဝေပေးပါမယ်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းသည် ဂိမ်း၏အမည်ဖြစ်သည်။